जिजीविषा: केही महावाणीहरु
महावाणी ठुला विद्वानहरु का मात्र हुँदैनन । जो कोही पनि आफ्नो भनाइलाई माहावाणी को रुप मा प्रस्तुत गर्नसक्छ । त्यसैले यहाँ म पनि केही मेरो ......... अहँ मेरो होइन , केही अरु का महावाणीहरु राख्दै छु । उनिहरु को बिशेष अनुरोध मा उनिहरु ले बिभिन्न समय र प्रसँग मा बोलेका कुराहरुलाई म यो मेरो ब्लग मा राख्दै छु । एउटा कुरा पहिले नै भनिहालौं यहाँहरु को पनि केही महावाणी छ भने , मलाई सम्झिनुहोला है !!!
-हाङओभर बाट मुक्त हुने एउटै उपाय हो , सधैं पीइरहनु । - सोम प्रसाद
-मेरो सल्लाह लिनुस् , जस्को मलाई कुनै काम छैन । - आत्मिय मित्र
-पैसा दु:ख को कारण हो भने , त्यो पैसा मलाई दिनुस् र जीवन सुखी बनाउनुस् । - धुर्त पण्डित
-यदी माया आगो भएको भए , अहिलेसम्म म खरानी भाई-सक्थें । - प्रेमी
-मलाई पनि कसैले प्रेम गरोस् , प्रेम मा निन्द्रा हराउछँ रे ! किनभने मलाई खुब निन्द्रा लाग्छ यार !! - निन्द्रा कुमार
-म त्यस्तो कुनै राम्रो काम गर्न चाहन्न , किनभने राम्रो काम गरे भविस्यमा मेरो नाम चेन्ज भएर "अमर" हुन्छ रे ! - ओवर स्मार्ट
-म कुनै सुन्दर , आकर्षक , सुखी , सम्पन्न ब्यक्ती को हत्या गर्न चाहन्थें , तर जब मैले आत्महत्या गर्नु ठुलो अपराध हो भन्ने थाहा पाएँ , मैले उक्त बिचार त्यागिदिएँ । - ओवर स्मार्ट
-बिहान नौ बजे पछी सधैं जरो आ-ईदिए हुन्थ्यो । - स्कुल जाने साना नानीहरु
-पढेर के गर्नु यार ? एक दिन त मर्नै छ ! यदी अर्को जन्म भयो भने पनि फेरी नर्सरी देखी नै सुरु गर्नु छ । - विद्यार्थी
-म जस्तो बोल्न जान्ने , अरु मान्छे यस संसार मा छदैँछैनन । - आर.जे. / भि.जे.
-आत्तिनु पर्दैन , " तपाईंलाई केही भएको छैन ," मैले लेखिदिएको यी औषधीहरु खाएपछी ठीक हुन्छ ! ठीक भएन भने एकपटक फेरी आउनुहोला । - डाक्टर
-हाम्रो चलचित्र " फरक धार " मा बनेको मौलिक नेपाली चलचित्र हो । - नेपाली चलचित्रकर्मी
-प्रेरणा को कुरा , भो नसोध्नुस् , हिजो-आज प्रेरणा सँग मेरो सम्बन्ध राम्रो छैन । - ८ क्लास पास नेपाली कलाकार
-डाका ले गाउँ नै लुटे रे !!!! आत्तिनुपर्दैन , यो हामीलाई असफल बनाउने प्रतिगामी को चालमात्र हो । - नेता
-"चियाबारी" भन्ने रिमिक्स गीत को भिडियो धेरै पटक हेरं , तर गीत मा कतै चियाबारी नदेखे पछी चियाबगान को पोस्टर ल्याएर टि.भी नजिक टाँसिदिए । हिजो-आज म चियाबारी गीत को म्युजिक भिडियो मा चियाबगान को पोस्टर मिक्सिङ गरेर हेर्नेगर्छु । - दर्शक
-पानी खान पाइएन भनेर बन्द , हड्ताल नगरनुहोस् , केही बर्ष मा नै हामी काठमाडौं को रोड समेत मेलम्ची ले सफा गर्दिन्छौँ । - मन्त्री
-हामी "पिउनेपानी" लाई , "खानेपानी" भन्छौँ , किनभने धाराबाट आउने पानी हामी चबाएर नै खान्छौँ । - उपभोक्ता
-मेरो हजुरबा यती पुरानो मान्छे कि , त्यतिबेला ईतिहासलाई पनि समसाम्-यिक बिषय भनिन्थ्यो रे !!!! - ओवर स्मार्ट
-फुट्पाथे पसल , फुट्पाथ मा त राखिन्छ नि , हिंड्न पाइएन भनेर हुन्छ । - फुट्पाथ पसले
-म जत्तिको ब्यङग्य हान्न सक्ने मान्छे यस् संसार मा अरु कोही छैन । - ब्यङग्यकार
Posted by Bijay Mishra at 12:08:00 PM Labels: नेपाली घोच्पेच